ekhaya / Bible / YeVangeli kaMateyu / ch 7 Matthew
7:1 "Musani ukugweba, ukuze ningagwetywa.
7:2 Kuba konke ngogwebo enigweba, ngoko niya kugwetywa; nangomlinganiselo enilinganisela abanye ngawo ngaphandle, ngoko niya kulinganiselwa kwangawo kuyibuyisela kuwe.
7:3 Uyabona indlela elaqhekeka olukwiliso lomzalwana wakho, kwaye ubone ibhodi okwelakho iliso?
7:4 Okanye njani na ukuthi kumzalwana wakho, 'Makhe sithathe elaqhekeka elisweni lakho,'ngelixa, khangela, ibhodi iliso lakho?
7:5 bulu, kuqala ukususa ibhodi kwelakho iliso, yaye uya kwandula ke ubone ngokwaneleyo ngokucacileyo ukususa i elaqhekeka elisweni lomzalwana wakho.
7:6 Musa ukunika ingcwele izinja, kwaye noyiphosa iiperile zakho phambi kweehagu, hleze lowanyathela phantsi kweenyawo zabo, ke ngoku, kokucima, ukuze akususe ngaphandle.
7:7 Buza, naniya kuphiwa nani. Funa, kwaye uya kufumana. knock, kwaye uya kuvulelwa.
7:8 Kuba wonke umntu ocelayo, ifumana; yaye nabani na ofuna, uyafumana; kwaye nabani na unkqonkqozayo, uya kuvulelwa.
7:9 Okanye worhola ntoni na umntu phakathi kwenu, ngubani, ukuba unyana wakhe ukumbuza ukuba isonka, ukuba amnike ilitye;
7:10 okanye ukuba babe ukumbuza ukuba intlanzi, ukuba amnike inyoka?
7:11 ngoko ke, ukuba u, nangona nikhohlakele, niyakwazi ukubapha izipho ezilungileyo oonyana bakho, wobeka phi na ke yena uYihlo, osezulwini, ukugqithisela ngokubapha okulungileyo abo bamcelayo?
7:12 ngoko ke, zonke izinto enisukuba ukuba unqwenela ukuba abantu benze ngako kuni, enze kwangokunjalo kubo. Kuba oko kungumthetho nabaprofeti.
7:13 Ngena ngesango elimxinwa. Ngokuba libanzi isango, iphangalele indlela, nto leyo ekhokelela nentshabalalo, baninzi kukho abangena ngayo.
7:14 Indlela limxinwa isango, nendlela ngqo yindlela, nto leyo ekhokelela kubomi, yaye bambalwa kukho ke abalifumanayo!
7:15 Ke kaloku balumkeleni abaprofeti ababuxoki, abeza kuni ngezambatho zeegusha, kodwa ngaphakathi beziingcuka eziqwengayo.
7:16 Uya nobaqonda ngeziqhamo zabo. Ngaba iidiliya ahlanganiselwe emeveni, okanye amakhiwane enkunzaneni?
7:17 Ngoko ke, yonke imithi elungileyo ivelisa iziqhamo ezihle, kwaye umthi ububi uvelisa iziqhamo ezibi.
7:18 Umthi olungileyo akukho nako ukuvelisa iziqhamo ezibi, kwaye umthi ububi ayikho nako ukuvelisa iziqhamo ezihle.
7:19 Yonke imithi ongavelisi siqhamo sihle uya kugawulwa uze uphoswe emlilweni.
7:20 ngoko ke, nobaqonda ngeziqhamo zabo ubazi.
7:21 Asingabo bonke abathi kum, 'Nkosi, Nkosi,'Uya kungena ebukumkanini bamazulu. Kodwa wenza intando kaBawo, osezulwini, uya kungena ebukumkanini bamazulu.
7:22 Abaninzi baya kuthi kum ngaloo mini, 'Nkosi, Nkosi, ngaba ungaprofeti egameni lakho, wakhupha iidemon egameni lakho, kwaye enze izenzo ezininzi yamandla egameni lakho?'
7:23 Kwaye ke ndiya kuyivulela ngohadi kubo: 'Andizange andinazi nina. Sukani kum, nina nonke basebenzi bokungalungileyo. '
7:24 ngoko ke, wonke umntu owevayo la mazwi am aze awenze uya kufaniswa nendoda eyingqondi, eyakha indlu yayo phezu kolwalwa.
7:25 Ke imvula wehla, Imilambo asuka, yavuthuza imimoya, bagaleleka kuloo ndlu, kodwa ayawa, kuba ibisekelwe elulwalweni.
7:26 Yaye wonk 'ubani owevayo la mazwi am, angawenzi, uya kuba ufana nendoda esisiyatha, eyakha indlu yayo phezu kwentlabathi.
7:27 Ke imvula wehla, Imilambo asuka, yavuthuza imimoya, bagaleleka kuloo ndlu, kwaye liwa, kwaye zinkulu ukuwa kwayo. "
7:28 Kwathi, xa uYesu wawugqiba la mazwi, that the crowds were astonished at his doctrine.
7:29 Kuba ebezifundisa umntu onegunya, and not like their scribes and Pharisees.
EyoMsintsi 24, 2019